नेपालको झन्डा जला’इएको गीत ‘देश द्रो’ही’का गायकको खोजीमा प्रहरी – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालको झन्डा जला’इएको गीत ‘देश द्रो’ही’का गायकको खोजीमा प्रहरी
काठमाडौँ — युट्युबमा सार्वजनिक भएको ‘देश’द्रोही’बोलको गीत र भिडियोको चौतर्फी वि’रोध भएको छ । भिडियोमा नेपालको झन्डा ज’लाइएको छ भने कुनै जाति विशेषलाई गा’ली गरिएको छ । गीतलाई मंगोल ग्याल्जीले गाएका छन् ।
मंगोल हप नामको युट्युब च्यानलबाट सोमबार सार्वजनिक भएको यो गीतलाई ग्याल्जीले नै लेखेका हुन् । कुनै जाति विशेषलाई शरणार्थी भन्दै गा’ली गरेको यस गीतलाई युट्युबमा ५९ हजार बढीले ‘डिसलाइक’ गरेका छन् । भिडियोमा ढाको टोपी र झन्डाको अप’व्याख्या गरिएको छ ।
भिडियोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला,पृथ्वीनायारायण शाहलगायतको तस्बिरसमेत जलाइएको छ । मंगोल मास्ने,खस लिपि लाद्ने,उर्वर भूमि खो’स्ने,विजयादशमी मान्न लगाउने कुनै जाति विशेष नै भएको उल्लेख गर्दै गीतमा मंगोल राष्ट्र’वादको बाटो रोज्नुपर्ने बताइएको छ ।
भिडियोमा नेपालको झन्डा जलाएको भन्दै कमेन्टमा आ’पत्ति जनाउनेहरुले गायकलाई कार’बाहीको मागसमेत गरेका छन् । यस्तो काम गर्ने सोच कसरी आउँछ । म यो पूरा गीतसँग सहमत छैन । कसैसँग जातीयता र जातको आधारमा विभेद गर्न अधिकार छैन । उनीहरुले स’जाय पाउनुपर्छ र यो गीत ब्यान्ड हुनुपर्छ लक्ष्मी पुनले कमेन्टमा लेखेकी छिन् ।
धेरैले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा कार’बाहीको माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले झन्डा ज’लाउने धार्मिक सामाजिक र जातीय द्वेष फैलाउनेलगायतका कसुरमा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्न प्रहरी खटिएको बताए । एसएसपी कडायतले मुलुकी अप’राध संहिता ऐन २०७४ को दफा १५१ अनुसार दोषीलाई कार’बाही हुने बताए ।
राष्ट्रियगान,राष्ट्रिय झन्डाको दुरु’पयोग नेपाल र नेपाल सरकार वि’रुद्ध घृ’णा फैलाउने गराउनेलगायतका गतिविधि गर्नेमाथि तीन वर्ष कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरि’वाना वा दुवै स’जाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
भिडियोको चौतर्फी वि’रोध भएपछि गायक ग्याल्जीले ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामको फेसबुक अकाउन्टबाट लाइभ गर्दै भनेका छन्,मलाई सिधै देश दो’ह्रीको आ’रोप आइरहेको छ । देश दो’ह्री के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
नेपालभित्रको असली मूलवासीको राष्ट्रियता लु’ट्ने को त ? त्यही बाहुन क्षेत्री होइन त ? मैले सबै बाहुन क्षेत्रीलाई भन्न खोजेको होइन । जो नीति बनाउने क्षेत्रमा पुगेका छन् उनीहरुलाई भनेको हो ।
श्री कृष्ण भगवानकाे दर्शन गरि एक सेयर गर्दै हेर्नुहाेस् आज बुधबारकाे राशिफल
दु:खद खबर :विहान घरमा परिवारसँगै खाना खाएर निस्केका दाजुभाइको शव जयश्री खोलामा भेटियो
ग्याँस सिलिण्डर पड्किँदा यूएईमा एक जना नेपालीसहित पाँच जनाकाे ज्यान गयाे
गोली हानेर आफ्नै साथीको हत्या गर्ने सुटर पक्राउ